खाटो कोट्याउने ओली- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
नेताहरूको बानी देख्दा अचम्म लाग्छ  । यतिबेला नेकपाका दुई वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीच वरियताको विषयलाई लिएर निकै विवाद भएको छ  ।
गतवर्ष जेठमा पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन एमालेमा दुई वरिष्ठ नेतामध्ये दोस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई केपी ओलीले खनाल नभएको मौका पारी पहिलो स्थान दिएका थिए । जुनबेला खनालले केही असन्तुष्टि देखाए पनि त्यसको चर्को आलोचना भने भएन र नेपाल पहिलो वरियतामा नै रहँदै आए । त्यसपछि खनालले आफूलाई सन्तुष्ट बनाइसकेका थिए र वरियताको कुरा लगभग सुल्झिसकेको थियो । खाटो बसिसकेको घाउ कोट्याउने काम त स्वयं ओलीबाटै भएको हो ।
समान हैसियतको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्ड त कुनै भूमिका नपाए जसरी बेलाबखत पार्टी एकता नगरेको भए हुनेरहेछ भन्न थालेका छन् भने नेपाल, खनालको भूमिका जहाँ भए पनि त्यसको औचित्य देखिँदैन । हिजो नेपाल पहिलो नम्बरमा भएर के भयो र आज खनाललाई पहिलो नम्बरमा ल्याउँदा के हुन्छ ? मुख्य कुरा काम हो, काम गरेर देखाउनसके वरियताको कुनै अर्थ रहँदैन । उनले उठाएको दोस्रो पक्ष भने सही छ । तत्कालीन एमालेमा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा चुनिएर आएका उपाध्यक्षभन्दा तल्लो तहका नेता अहिले पार्टीको सचिवालयमा अटाएका छन् भने तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्षहरूलाई सचिवालयमा लगिएको छैन । उनीहरूलाई पनि सचिवालयमा लैजानुपर्छ भन्ने उनको माग उचित छ ।
सरकारका गतिविधि दलालीकरण र भ्रष्ट क्रियाकलापमा नै केन्द्रित रहेको आभाष हुनथालेको छ  ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तको तौरतरिका, पञ्चायतकालीन ठेक्का दिने प्रकरणको थालनी, पत्रकार पुडासैनी काण्ड लगायतका गतिविधिले सरकार आफै अस्थिरताको कारक बन्दैछ जस्तो लाग्छ । प्रतिपक्ष नाम मात्रको छ । देश वैदेशिक ऋणमा डुबिसकेको छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देशमा किन अन्यायका बादल मडारिएको छ ? देशले किन गति र लय लिनसकेको छैन ?
अहिले देशको गतिविधि हेर्दा निराशा धेरै छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बनेको छ । यो खेदजनक छ । दुई तिहाइको सरकार आश्वासनमा मात्र केन्द्रित छ । सरकारका गतिविधि युवालाई निराशा देखाउने मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्नेमा दलाल र भ्रष्टहरूको कमाइखाने थलो भएको छ ।
– टंकप्रसाद गैह्रे, वालिङ–१३, स्याङजा